Na-atụgharị uche taa n’ihe niile Chineke nyere gị, kedụ onyinye gị? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na-atụgharị uche taa n’ihe niile Chineke nyere gị, kedụ onyinye gị?
di Paolo Tescione - November 15, 2020
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ilu a: “Otu nwoke nke nọ na njem, kpọrọ ndị na-ejere ya ozi ma nyefee ha ihe onwunwe ya n’aka. Otu ka o nyere talent ise; nye onye ọzọ, abụọ; owo kiet kiet, kiet, nte owo kiet kiet nte ukeme esie edide. Mgbe ahụ, ọ pụrụ. "Matiu 25: 14-15
Itien̄wed emi ọtọn̄ọ ke uwụtn̄kpọ talent. N’ikpeazụ, mmadụ abụọ n’ime ndị ohu ahụ rụsiri ọrụ ike iji ihe ndị ha nwetara rụpụta ihe ọzọ. Otu n’ime ndị odibo ahụ emeghị ihe ọ bụla wee nata ya ikpe. E nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta n’ilu ​​a. Ka anyị leba anya n’ihe mmụta gbasara ịha nhatanha.
Na mbụ, i nwere ike iche na e nyere onye ọ bụla n’ime ndị na-ejere ya ozi talent dị iche iche, ya bụ, usoro ego e nwere n’oge ahụ. N'ụbọchị anyị a, anyị na-agbado anya n'ihe ọtụtụ kpọrọ "ikike nha anya". Anyị na-enwe anyaụfụ ma na-ewe iwe ma ọ bụrụ na ọ dị ka a na-emeso ndị ọzọ karịa anyị ma enwere ọtụtụ ndị na-ekwuwa okwu banyere enweghị nghọta ọ bụla
Olee otú ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye natara naanị otu talent n’akụkọ a mgbe ị hụrụ ka mmadụ abụọ ọzọ natara talent ise na abụọ? Ọ ga-adị gị ka a ghọgburu gị? Ga-eme mkpesa? Enwere ike.
Ọ bụ ezie na isi ihe dị n’ilu ​​a dị n’ilu ​​a gbasara ihe ị na-eme n’ihe ị natara, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara na o yiri ka Chineke na-enye ndị dị iche iche òkè dị iche iche. Somefọdụ n'ime ha na-enye ihe yiri ọtụtụ ngọzi na ibu ọrụ. N’ebe ndi ozo no, odi ka inye onyinye pere mpe n’ime ihe akuru na uwa.
Chineke na-ekpe ikpe ziri ezi n'ụzọ ọ bụla. Ya mere, ilu a kwesịrị inyere anyị aka ịnakwere eziokwu ahụ bụ na ndụ nwere ike ọ gaghị abụ mgbe ọ “pụtara” ihe ziri ezi na nha anya. Mana nke a bụ echiche ụwa, ọbụghị nke dị nsọ. Site n’uche Chukwu, ndị nke enyere ihe pere mpe n’ụwa niile nwere ikike ịmị mkpụrụ n’ụba dị mma dịka ndị enyere nnukwu ọrụ. Dị ka ihe atụ, chee banyere ọdịiche dị n’otu nde mmadụ nde mmadụ na-arịọ arịrịọ. Ma obu na odi iche di n’etiti bishop na ndi nkịtị. Ọ dị mfe iji onwe anyị atụnyere ndị ọzọ, ma nke bụ eziokwu bụ na naanị ihe dị mkpa bụ ihe anyị mere na ihe anyị nwetara. Ọ bụrụ na ị bụ ogbenye onye arịrịọ nke chere ọnọdụ siri ike na ndụ ihu,
Na-atụgharị uche taa n’ihe niile Chineke nyere gị. Kedu ihe bụ "talent" gị? Kedu ihe e nyere gị ka gị na ya rụọ ọrụ na ndụ? Nke a gụnyere ngọzi nke ihe onwunwe, ọnọdụ, onyinye sitere n'aka, na ọmarịcha amara. Ruo ókè ha a youaa ka ị na-eji ihe e nyere gị eme ihe nke ọma? Ejila onwe gị atụnyere ndị ọzọ. Kama, were ihe enyere gi ka iwere Chukwu too wee nye gi ugwo mgbe ebighi ebi.
Onyenweanyị, a na m enye gị ihe niile m bụ, a na m ekele gị maka ihe niile ị nyere m. Mee ka m jiri ihe nile ejiri gozie m maka ebube gi na n’iwu nke ala eze gi. Ekwela ka m tunyere onwe m na ndi ozo, na-ele anya n’emezu uche Gi di aso n’ime ndu m. Jesus ekwere m na gị.
Izu oke nke ịhụnanya, ntụgharị uche nke ụbọchị
Mmegbu: otu esi agbake na nsonazụ ya
Gafere mgbaghara, ntụgharị uche nke ụbọchị
Inye onyinye ebere ọ̀ bụ ụdị ọrụ ebere ziri ezi?
Ntụgharị uche nke ụbọchị: kpee ekpere maka uche Chineke
Na-atụgharị uche nke ụbọchị: nanị ezi ihe ịrịba ama nke obe
Ntụgharị uche nke ụbọchị: ịhụnanya miri emi na-eme ka ụjọ ghara ịtụ mmadụ